(L) ဆယ်ကျော်သက်များသည်ညစ်ညမ်းမှုကိုအဘယ်ကြောင့်စွဲလမ်းနေကြရသနည်း။ ကြေးနန်း - ယူကေ။ (၂၀၁၄) - ခင်ဗျားရဲ့ ဦး နှောက်
ညစ်ညမ်းနှင့်အတူအစောပိုင်း fixation လာနှစ်ပေါင်းဆယ်ကျော်သက် '' ဘဝတွေကိုပျက်စီးစေနိုင်သည်, ကျွမ်းကျင်သူများပြောပါ
အင်တာနက်ကိုဖန်တီးခဲ့ရှည်လျားမတိုင်မီဆယ်ကျော်သက်ရင်သား ogling ခဲ့ကြသည်။ ပိုပြီးလက်လှမ်းအရင်ကထက်သူတို့ထဲကအတော်များများ - - ဂရပ်ဖစ်ညစ်ညမ်းတဲ့ဖြစ်လာကြောင်းသို့သော်မှာ gawped ခံရဖို့ဤမျှလောက်များစွာသောပုံရိပ်တွေယခုရှိပါတယ် 11 ကဲ့သို့ငယ်ရွယ်သားသမီးတို့အဘို့အသက်တာ၏ပုံမှန်အစိတ်အပိုင်းတစ်ခု.
ပြည်သူ့ပေါ်လစီသုတေသန၏ Institute မှတစ်လေ့လာမှုထင်-အကြံပေးအဖွဲ့ညစ်ညမ်းစောင့်ကြည့်ဆယ်ကျော်သက်သူတို့ရဲ့လယ်ပိုင်းဆယ်ကျော်သက်ရောက်ရှိရန်နှင့်အင်တာနက်လိင်နှင့်ဆက်ဆံရေးနှင့် ပတ်သက်. သတင်းအချက်အလက်များ၏အရင်းအမြစ်အဖြစ်မိဘများထက်ပိုမိုမြင့်မားအဆင့်သတ်မှတ်ခံခဲ့ရသည်သောအချိန်အားဖြင့် "ဘုံ" ခဲ့ကြောင်းတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ တိုင်းပြည်အနှံ့ကျောင်းမှကျောင်းသားအွန်လိုင်းရှင်းလင်းပြတ်သားစွာဗီဒီယိုများမှတစ်ဆင့်လိင်မှမိတ်ဆက်ကြသည်နှင့်အမျှအနည်းသူတို့ရဲ့အချိန်ညစ်ညမ်းနောက်ပိုင်းမှာအသက်တာ၌၎င်းတို့၏ဦးနှောက်ဆက်ဆံရေးနှင့်လေ့လာမှုများကိုထိခိုက်ပါလိမ့်မယ်စောင့်ကြည့်သုံးစွဲပုံကိုနားလည်သဘောပေါက်။
လိင်စွဲလမ်းအတွက်အထူးပြုတဲ့သူ Psychotherapist Paula ခန်းမ, သူမကအပေါင်းတို့သည်မိမိတို့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအတွေ့အကြုံများအွန်လိုင်းဖြစ်ပျက်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူတို့ရဲ့နှစ်ဆယ်ကျော်အတွက်အပျိုကညာနေသောလူငယ်များ၏ "သိသာထင်ရှားသော" နံပါတ်တစ်ခုနှင့်အတူအလုပ်လုပ်ခဲ့ကပြောပါတယ်။ "သူတို့ကတစ်ဦးရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာဆက်ဆံရေးမျိုးရှိခဲ့ဖူးပါဘူး။ သူတို့ကသူတို့ကရှောင်ရှားနိုင်အောင်စစ်မှန်သောလိင်လုပ်ဖို့ဘယ်လိုမသိရပါဘူး "ဟုသူမကရှင်းပြသည်။
ခန်းမအလွယ်တကူ-လက်လှမ်းအွန်လိုင်းညစ်ညမ်းပေါ်အာရုံစူးစိုက်နေတဲ့ဆယ်ကျော်သက်အဖြစ်စတင်ဒါပေမယ့်စိုက်ထူပြဿနာများဖန်တီးခြင်းနှင့်ပိုမိုခက်ခဲလူငယ်များလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဆက်ဆံရေးရှိသည်ရန်အဘို့အအောင်, အသက်တာ၌များများစားစားနောက်ပိုင်းမှာဆက်ဆံရေးကိုပျက်စီးစေနိုင်ပါသည်။ ပြောပါတယ်
ဆယ်ကျော်သက်အရွယ်ဦးနှောက်အထူးသဖြင့်ပျော့ဖြစ်ကြပြီးဒါညစ်ညမ်းနှင့်အတူအစောပိုင်း fixation လူငယ်များညစ်ညမ်းပုံရိပ်များ 2D မှ fixed ဖြစ်ကြောင်း "လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာတင်းပလိတ်များ" ဖွံ့ဖြိုးဆိုလိုသည်။
“ ခင်ဗျားဟာသုံးဖက်မြင်မျှသာလူတစ်ယောက်နှင့်အတူရှိနေစဉ်ခန္ဓာကိုယ်ကဘယ်လိုတုန့်ပြန်ရမလဲမသိဘူး၊ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့မင်းကအရမ်းမြင့်ပြီးစဉ်ဆက်မပြတ်လှုံ့ဆော်မှုကိုခံနေရသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုကြည့်ခြင်းအားဖြင့်ညစ်ညမ်းမှုကိုသူတို့က 'စူပါပုံမှန်လှုံ့ဆော်မှုများ' ဟုခေါ်ကြသည်။
လျှို့ဝှက်ချက်ထဲမှာညစ်ညမ်းအကဲခတ်: အ fixation စိတ်ကျရောဂါဖြစ်စေနိုင်သည်ကိုဘယ်လို
ဒါပေမယ့်ပုံစံဆယ်ကျော်သက်အဖြစ်ဖွံ့ဖြိုးနေချိန်တွင်အများစုလူငယ်များသာ porn နှင့်အတူ၎င်းတို့၏စွဲစင်ပေါ်ကိုအရာအားဖြင့်, သူတို့တစ်တွေပြဿနာရှိသည်နှင့်သူတို့တက္ကသိုလ်ကနေတခါအကူအညီကိုရှာစတင်နားလည်သဘောပေါက်သူတို့ရဲ့နေ့စဉ်ဘဝအပေါ်သက်ရောက်မှုမှစတင်ခဲ့သည်။
"ငါသည်သူကသူတို့ကိုဆက်စပ်နိုင်ကြောင်းမည်သို့ထိတျလနျ့ရဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူမိန်းကလေးတစ်ဦးနှင့်အတူမည်သည့်ဆက်ဆံရေးမျိုးကိုရှောင်ကပြောပါတယ်တဲ့သူလူငယ်တစ်ဦးလူကလေးဖို့ပြောနေတာခဲ့ပါတယ်," ခန်းမကပြောပါတယ်။ "သူကသူတတျနိုငျသလိင် function ကိုစိုးရိမ်မယ့်သူလူမှုရေးအရ-phobic ဖြစ်လာမယ့်ဆိုပါတယ်ဒါပေမယ့်သူကရပ်တန့်ဖို့တကယ်ခက်ခဲတှေ့ရဲ့ - သူအစဉ်အဆက်ညစ်ညမ်းမှာမကြည့်ဖို့စီမံရဲ့အရှည်ဆုံးခြောက်ရက်ပတ်လုံးခဲ့ပါတယ်။ "
ဒီပြဿနာတွေကိုအဆန်းမဟုတ်ဖြစ်ကြသည်ကို၎င်း, ခန်းမကိစ္စကိုကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းကူညီပေးရန်တက္ကသိုလ်များနှင့်ကျောင်းသားများကိုနှစ်ဦးစလုံးနှင့်အတူအလုပ်လုပ်တယ်, ဒါပေမယ့်သူမငယ်ရွယ်လူတွေကိုသူတို့ရဲ့ပြဿနာတွေအကြောင်းပြောဆိုဒါ ပို. ပို. အထီးကျန်ဖြစ်လာမှရှက်ကပြောပါတယ်။
တဦးတည်းကိစ္စများတွင်သူမထွက်ကျဆင်းနေမတိုင်မီနှစ်ကြိမ်တက္ကသိုလ်မှာမိမိပထမနှစ်တွင်ထပ်ခါတလဲလဲသူတစ်ဦးလုလင်ကိုအတူအလုပ်လုပ်ခဲ့ပါတယ်။ "အမျှဝေးသူ့မိသားစုကိုသူစိတ်ကျရောဂါနှင့်စိုးရိမ်ပူပန်မှုခံစားနေရပြီးခဲ့သည်စိုးရိမ်ပူပန်ခဲ့ကြသည်အဖြစ်အမှန်ပင်သူကြီးပေမယ့်သူကကိုယ့်အကြောင်းကိုဘယ်သူ့ကိုမှပြောပြရန်သတ္တိရှိသည်မဟုတ်ခဲ့ပါကြောင်းဖြစ်သောကြောင့်မိမိအမြင့်တက် porn အသုံးပြုမှုခဲ့သည့်" ဟုသူမကရှင်းပြသည်။
လျှို့ဝှက်သို့အလွန်အကျွံ porn တပ်ဖွဲ့များလူငယ်များအကဲခတ်, စိတ်ကျရောဂါ, စိုးရိမ်ပူပန်ခြင်းနှင့်အခက်အခဲအခြားသူများနှင့်စပ်လျဉ်းဖို့ဦးဆောင်လမ်းပြနိုင်သည့်။ ဒါဟာအစကျောင်းသားများကို၎င်းတို့၏မပျော်ရွှင်အတူရင်ဆိုင်ဖြေရှင်းနိုင်မှ ပို. ပို. ညစ်ညမ်း watch ဘယ်မှာသံသရာ, ဖန်တီးပေးပါတယ်။ "Porn တစ်သိချင်စိတ်အဖြစ်စတင်သည်ဒါပေမယ့်ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းမဟာဗျူဟာဖြစ်လာ," ခန်းမကပြောပါတယ်။
ညစ်ညမ်းယခုဆယ်ကျော်သက်မကြာခဏအမှားအားဖြင့်အများဆုံးဂရပ်ဖစ်ပုံရိပ်များကိုဖြတ်ပြီးထိ မိ. လဲသောအအွန်လိုင်းဝင်ရောက်ဖို့ဒါနေရာအနှံ့လွယ်ကူသည်, စကားတခွန်းကိုညစ်ညမ်းရှောင်ရှား ပို. ပို. ခက်ခဲသည်။
အဆိုပါ နောက်ဆုံးပေါ်လေ့လာမှု ဆယ်ကျော်သက်များ၏ 10 18 နှစ်အရွယ်ထဲကရှစ်မတော်တဆအပါအဝင်, ထိုညစ်ညမ်း access ကိုသိပ်လွယ်ကူသည်ထင်နှင့် 10 ခြောက်ယင်း၏နေရာအနှံ့ပိုပြီးခက်ခဲတက်ကြီးထွားလာလုပ်ဆိုတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။
မင်းသမီး Emma Citron, တစ်ဦးအတိုင်ပင်ခံလက်တွေ့စိတ်ပညာရှင်တောင်မှသူတို့အညစ်ညမ်းလျှို့ဝှက်ချက်ထဲမှာတစ်ယောက်တည်းပုံရိပ်တွေကိုကြည့်တက်အဆုံးသတ်နိုင်ပါတယ်ထွက်ရှာရည်ရွယ်ကြဘူးသူကပြောပါတယ်။
"ကျွန်မမတော်တဆဂရပ်ဖစ်ညစ်ညမ်းဗီဒီယိုများတလွှားလဲသေကြပြီနှင့်၎င်းတို့၏မိဘများကိုပြောသည်မဟုတ်ကြသူကိုးဦးအဖြစ်ကိုငါ့ဆေးခန်းများတွင်ကလေးများအဖြစ်ငယ်ရွယ်မြင်ကြပါတယ်။ ဒါဟာချသူတို့၏စိတ်ဓါတ်များတွန်းနှင့်သူတို့အတော်လေးစိတ်ဓာတ်ကျဖြစ်လာစေမယ့် "ဟုသူမကထပ်ပြောသည်။
ကလေးများနှင့်ငယ်ရွယ်ဆယ်ကျော်သက်သူတို့အွန်လိုင်းကိုရှာဖွေလိင်ဗီဒီယိုများအားဖြင့်မကြာခဏစိတ်ခံစားမှုရှုပ်ထွေးဖြစ်ကြသည်ကို၎င်း, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာခံစားမှုအတူပါလာသောစိတ်ခံစားမှုနှင့်အတူရင်ဆိုင်ဖြေရှင်းနိုင်မှရုန်းကန်နိုင်ပါတယ်။ "သူတို့ကတစ်ဦးအမြန်စိတ်လှုပ်ရှားရှာကြံ, သကြားလုံးများကဲ့သို့ဆက်ဆံပေမယ့်သူတို့ရဲ့ဆက်ဆံရေးကိုထိခိုက်စေနိုင်ပါတယ်," Citron ကပြောပါတယ်။
နှင့်ဤလိင်၏သဘောသဘာဝပြောင်းလဲနိုင်သည် - လူအတော်များများလူငယ်များတဖြည်းဖြည်းနှင့်လုံခြုံစိတ်ချစွာနေတဲ့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကြားဆက်ဆံရေးတိုးတက်ချင်ပေမယ့်နှင့်အညီ, porn ၏ပျံ့နှံ့မှုများစွာကိုခံစားအစောပိုင်းလိင်ရှိသည်ဖို့ဖိအားပေးတာကိုဆိုလိုတယ်။
Citron ဂရပ်ဖစ်ညစ်ညမ်းပုံရိပ်များမကြာခဏအမျိုးသမီးတွေထောင်ချီအမြင်များကိုတင်ပြ, နှင့်အမျိုးသမီး subservient များမှာဘယ်မှာလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဆက်ဆံရေးဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သည်ကိုကပြောပါတယ်။
"အွန်လိုင်း porn အတော်လေးတုန်လှုပ်ဖွယ်ဖြစ်ကြောင်းနှင့်သင်ပင်ထိုအချိန်ကနားလည်သဘောပေါက်နိုင်မည်မဟုတ်ပါပေမယ့်သင့်ရဲ့ psyche များ၌လိမ့်မည်ဟုဗီဒီယိုများပါဝင်သည်။ သငျသညျက flashbacks ရစေခြင်းငှါ, ကလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ-ကျော်ကသင်ပင်ကိုဖြတ်ပြီးလဲရည်ရွယ်မစေခြင်းငှါအလွန်ဂရပ်ဖစ်များနှင့်မသင့်လျော်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပုံရိပ်တွေမှတဆင့် may "လို့သူကပြောပါတယ်။
ငယ်ရွယ်သောစိတ်များသည်ဂရပ်ဖစ်နှင့်အကြမ်းဖက်လိင်ဆိုင်ရာပုံများနှင့်ပိုမိုထိတွေ့နေပုံရသည် - ၎င်းသည်လူအများစုအတွက်၎င်းတို့၏လိင်ပညာရေး၏အခြေခံဖြစ်သည်။ သူတို့သည်မည်မျှကြည့်ရှုသည်ကိုကန့်သတ်မထားပါကဤညစ်ညမ်းသောညစ်ညမ်းရုပ်ပုံလွှာသည်ဆယ်ကျော်သက်များ၏လိင်ဆက်ဆံမှုအပေါ်သူတို့၏ဘ ၀ တစ်လျှောက်လုံး၏သဘောထားကိုပုံသွင်းပေးနိုင်သည်။